.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Sothink SWF Easy နဲ့ Flash Button လေးတွေ လုပ်ကြမယ်
Sothink SWF Easy နဲ့ Flash Button လေးတွေ လုပ်ကြမယ်
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက Flash နဲ့ Album တွေ ၊ Banner တွေ ၊ Navigation Buttons တွေ လုပ်တဲ့နေရာမှာ သုံးတာပါ။
သူငယ်ချင်းတို့ ဆိုဒ်တော်တော်များများမှာ သုံးထားကြတာကို တွေ့ဖူး မြင်ဖူးကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အောက်က
ပုံထဲကလို Flash Button လေးတွေနဲ့ ဆော့ဝဲလ် Download လင့်တွေ ဝဘ်ဆိုဒ်လင့်တွေ ထည့်ပြီး ချိတ်ထားတာမျိုးပါ။
နှိပ်တဲ့အခါ အသံလေးတွေပါ ထည့်လို့ရပါတယ် ။ အသုံးပြုနည်းကိုတော့ အနော် Ebook လေး လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Download: Sothink Flash Easy Software
Version: 6.1.90205 [ Full Version With Serial ]
အသုံးပြုနည်းစာအုပ်ကိုတော့ ဒီနေရာလေးကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ..။
မှတ်ချက်။ ။အသုံးပြုနည်းကိုတော့ ကိုအာကာမိုးနိုင် ဆိုဒ်က ကူးပြီးတော့ အနော် PDF ဖိုင် လုပ်ပေးလိုက်တာပါ။
Posted by Thurainlin at 09:28
Labels: Button Maker, Flash, Software, နည်းပညာ